Tsanangudzo:IPhone 8 Plus Battery IOS,IPhone 8 Plus Battery IOS Update,IPhone 8 Plus Battery Support IOS
Apple yakayemura Older iPhone mifananidzo inogona kuenderera mberi nokuda kwekukwegura mabheti. Kana iwe uchida iPhone itsva Plus Plus IOS Battery ye iPhone yako yakwegura , zvinhu zvingave zvakawana zvishoma nyore. New iPhone 8 Plus Kubatsiridza Battery iOS 11.4 update, Kwete kungobhadhara zvakapfurikidza asi kusanyanya kupisa kwemafivha, zvisinei, kuongorora kwakakwana kwebheteri simba nekuchengetedza IC nguva refu yeupenyu. iPhone 8 Plus Battery Replacement vakakumbira shanduro yepamhizha yepamhizha yakatsigirwa, isu tinonyanya kukurudzira TI solution yekutanga. TI IC ndiyo nzira yepakutanga ye iPhone bateri, Kutengesa zvakanyanya kukurumidza, kusanyanya kunaya kupisa kuchengetedza hupenyu hwebheteri. Munguva iyi, zero rinenge uye 100% yakachena cobalt cell inochengetedza kushanda kwakasimba se 80% yakadzika kunyange yakashandiswa 500 cycle nguva. Uyewo kutengesa kunopesana uye kunyatsoongorora mabhenji emagetsi kuchaita kuti iPhone yako yebheteri iwedzere kukurumidza mumamiriro ezvinhu akachengeteka.
IPhone 8 Plus Battery IOS IPhone 8 Plus Battery IOS Update IPhone 8 Plus Battery Support IOS IPhone8 Plus Battery IOS IPhone 7 Plus Battery IOS IPhone6S Plus Battery IOS IPhone 8 Battery IOS iPhone 8 Plus Battery